SIDEN KU SHARCIYEEYAA SHAHADOOYINKEYGA WAX BARASHO? | JumaMap
SIDEN KU SHARCIYEEYAA SHAHADOOYINKEYGA WAX BARASHO?
PrevPrecedenteIlmaha kaligood socio ee aanan heysan masuul
SuccessivoSuper Green Pass: sharciyo cusub ayaa dhaqan galaya laga bilaabo 6 Disembar 2021 ilaa 15 Janaayo 2022Next
Assolavoro: adeegyada shaqada iyo taageerida ee qaxootiga/iyo
AssoLavoro, , Ururka Qaranka ee Xafiisyadda Shaqada ka shaqeeya , wuxuu hormariyaa , iyada oo la kaashanaysa UNHCR, mashruuca ” Martigelinta & Shaqada” kaas oo
153 Visite totali, 44 visite odierne
Waa maxay sharciga degenaanshada? Waa dukumeenti ay soo saareen mas’uuliyiinta Talyaanigu oo siinaya qofka ajnabiga ah xaqadeggenaanshaha dhulka Dawladda. Muddada ushaqeynaayo wuu kala duwaan karaa
431 Visite totali, 43 visite odierne
Imaatinka Talyaaniga Sabab Shaqo
Sideed Talyaaniga loo soo gala shaqo awgeed? Tirada dadka ajnabiga ah ee loo ogolaadoTalyaaniga haa’yad ama shaqsi u shaqeeya (oo ayku jiraan shaqo xilliyeedka )
480 Visite totali, 43 visite odierne